Iindaba -Ixabiso leoyile Buyela kwi-7 Yuan, kufuneka silungiselele ntoni ukuthenga imoto yombane emsulwa?
Ixabiso leoyile libuyela kwi-7 Yuan, yintoni ekufuneka siyilungiselele ukuthenga imoto yombane emsulwa?
Ngokwedatha yamaxabiso eoyile yamva nje, ipetroli yasekhaya eyi-92 kunye ne-95 izakuvuka i-0.18 kunye ne-0.19 yuan ngobusuku bukaJuni 28. Ngexabiso langoku le-6.92 yuan / ilitha ye-petroli engama-92, amaxabiso eoyile yasekhaya abuyele kwi-yuan ye-7. Ixesha. Oku kuyakuba nefuthe elikhulu kubanini bemoto abaninzi abakulungeleyo ukuthenga imoto. Ukudibanisa nokukhula ngokukhawuleza kweemodeli zombane ezicocekileyo okwangoku, abantu abaninzi baya kuyithathela ingqalelo. Nangona kunjalo, kuko konke ukulunga, iimodeli zombane ezicocekileyo azilungelanga wonke umntu, ubuncinci xa uthenga imoto, nazi izinto ezimbalwa onokuzilungiselela.
Okokuqala, isixeko ahlala kuso umnini moto kwaye sihlala kakuhle emazantsi, ubuncinci hayi ikakhulu emantla, njengamaphondo amathathu akumantla mpuma, njl. Siyazi ukuba kwimimandla ebandayo, nokuba ibhetri yeLithium Ion okanye ibhetri ye-lithium phosphate ibhetri iya kuncitshiswa ibhetri enkulu, engenabungane kumnini wemoto, ngaphandle kokuba uhambo lwemihla ngemihla lusondele, ukuhamba nje okulula, kungangcono ukuhamba negesi-enikwe amandla okanye iplagi ye-hybrid.
Ukongeza, iimeko zayo zokutshaja zikwabaluleke kakhulu. Ukuba indawo yokupaka iyafumaneka kwaye iiposti zokutshajaza zinokufakwa, ke iindleko zokusebenza zizonke ziya kuba sezantsi kakhulu. Izakonga imali eninzi unyaka nonyaka kunemoto yezibaso, kodwa ukuba le meko ayifumaneki, ukuba kufuneka ukhathazeke ngokuba uza kuyibiza malini yonke imihla imoto yakho, kwaye ulusizi ukubona i-PR igcwalisa imfumba egcwele iimoto, emva koko oku akunjalo kwiimodeli zombane.
Kwaye kuba ixabiso lemoto yombane liphezulu kakhulu, ixabiso lilonke liya kubiza kakhulu kunenqwelo mafutha. Abanini bemoto baya kuthatha ingqwalaselo ebanzi. Ukuba imoto inobomi obude, ke iindleko zizonke ziyafana, nokuba iimoto zombane ziphantsi, kodwa ukuba ufuna ukutshintsha iimoto kwiminyaka emithathu ukuya kwemihlanu, ukusuka kwinqanaba lolondolozo, imoto yezibaso nayo iphezulu kune iimoto zombane.
Iimeko zemoto yombane zibukhali ngandlela ithile, kodwa izibonelelo zayo zicace gca, ngakumbi kwezinye iidolophu apho kuthintelwe ukhenketho kunye nokuthenga, ukuthenga imoto yombane ayisiyonto ilula kuphela, ikwasebenza ngakumbi, kwaye amava okuqhuba kwimoto yombane angcono, ukukhawulezisa ngokukhawuleza kunye nenqanaba eliphezulu le-NVH ngokubanzi.
Ixesha Post: Jul-02-2021